अब्रोड स्टडीका लागि उचित परामर्श दिनु नै मुख्य लक्ष्य हो — OnlineDabali
एन्ड्रयु पौडेल, डाइरेक्टर, ग्रेस इन्टरनेश्नल
Posted on March 29, 2016 by अनलाइन डबली
शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसायमा लाग्नु भएको कति भयो ?
ग्रेस एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सी स्थापना २०६२ सालमा भएको हो । र, म स्थापना कालदेखि नै यस संस्थामा आबद्ध छु । यस संस्थामा मेरो जिम्मेवारी भएको सुरुदेखि नै परामर्श सेवा रहेको छ । अहिले पनि यही सेवालाई आफ्नो क्यारियरको रुपमा लिएको छु ।
उसो भए यो व्यवसाय उपयुक्त नै रहेछ, हैन त ?
यो पेशा तब सफल मानिन्छ जब दिएको परामर्शले कुनै विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । अनि जो विद्यार्थी सफल गन्तब्यमा पुग्छ, तब मात्र पेशालाई निरन्तरता दिने उर्जा मिल्छ ।
मेरो उद्देश्य नै विद्यार्थीलाई राम्रो परामर्श दिई उसको उज्ज्वल भविष्यका लागि मार्गदर्शन गराउनृु हो । मलाई लाग्छ एक कुशल परामर्शदाताको परामर्शले नै विद्यार्थीको जीवन सफलतामा पुर्याउन ठूलो सहयोग पर्याउँछ ।
यो क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको कुरालाई मान्नुहुन्छ ?
कुनैपनि क्षेत्र विकृति र विसंगतिरहित हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हरेक क्षेत्र कुनै न कुनै कमजोरी भएकै हुन्छ । यसको मतलब यो होइन कि यस्ता कुरालाई वेवास्ता गरेर जानु पर्छ भनेको होइन ।
बरु पछिल्लो समयमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यस व्यबसायलाई मर्यादित बनाउनको लागि एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य यो क्षेत्रमा जो पायो त्यही प्रवेश गरेर सच्चा व्यबसायीहरुको लागि वातावरण बिगार्ने काम गरियोस् भन्ने हो ।
कन्सल्ट्यान्सीमाथि देशभित्रका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन गरायो भन्ने आरोपबारे के भन्नु हुन्छ ?
यो अरोप सरासर गलत छ । हामीले अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन विदेश पठाउन सघाएका मात्र हौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गन विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई सही परामर्श दिने काम गरेका छौं ।
जहाँसम्म पलायनको कुरा छ, स्वदेश फर्कने र काम गर्ने वातावरण यदि राज्यले गरिदिएको भए सायद विदेशमा अर्काको देशमा अत्मसम्मानमाथि चोट बोकेर किन बस्थे होलान् नेपाली प्रतिभाहरु ।
ठूलो खर्च गरेर पढाई सकाएपछि रोजगारको वातावरण बनाउन राज्य उदासिन भइदिएपछि धेरै विद्यार्थी स्वदेश नफर्कन न सक्छन् । यसको शैक्षिक परामर्शदाताहरुको कुनै दोष छैन ।
तपाईहरु अन्य मुलुकभन्दा अष्ट्रेलिया बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ, किन ?
विश्वका अरु देशमा पनि विद्यार्थीहरु पठाउने काम गरिरहेकै छौं । तर तुलनत्मक रुपमा अष्ट्रेलियामा बढी केन्द्रित भएको कुरा साँचो हो । हामी चाहिं शुरुदेखि अष्ट्रेलियाको जोड दिँदै आएका हौं । अरुजस्तो गन्तव्य परिवर्तन गर्दैनौं ।
विशेष ध्यान चहिँ अष्ट्रेलिया नै हुनुको मुख्य कारण नेपाली विद्यार्थीको निम्ति उपयुक्त गन्तब्य भएकाले हो । अष्ट्रेलिया मुलुक नेपाली विद्यार्थीका लागि मात्रै नभएर विश्वभरका विद्यार्थीहरुलाई अझ भनौं थर्डवल्र्ड कन्ट्रीका विद्यर्थीका निम्ति उपयुक्त छ । खास गरेर अन्य मुलुकहरुमा बाहिरको विद्यार्थी भनेपछि दृष्टिकोण पनि त्यस्तै हुने, भेदभाव पनि उस्तै ।
साथै, अष्ट्रेलियामा वल्र्ड र्यारङ्कमा परेका टप विश्व प्रसिद्ध युनिभर्सिटीहरु छन् । जसले गर्दा त्यताको डिग्री विश्वभर बिक्छ ।
हामीले अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन विदेश पठाउन सघाएका मात्र हौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गन विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई सही परामर्श दिने काम गरेका छौं ।
अष्ट्रेलियमा पनि तपाईहरुको शाखा कार्यालय छ ?
अष्ट्रेलियाको मेलब्रन शहरस्थित हाम्रो शाखा कार्यालय छ । नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरुलाई सिधै त्यो शाखा कार्यालयमा पठाउँछौं । त्यहाँ नयाँ ठाउँमा आइपर्ने विविध समस्याहरु झेल्न सघाउने काउन्सिलिङ् गर्छौं । जस्तै, कलेजमा आइपर्ने समस्या, नयाँ वातावरणमा घुलमिलको हुन समस्या, जवफाइण्ड आउट गर्ने लगायतका समस्याबाट मुक्ति दिलाउने कार्य त्यहाँस्थित कार्यालयले गर्छ । यसकारण हामीकहाँबाट जाने विद्यार्थीलाई सहज भएको छ ।
अन्त्यमा, ग्रेस इन्टरनेशनल कन्सल्ट्यान्सीलाई नै विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श केन्द्र बन्नुको विशेषता ?
पहिलो, सन् २००६ मा स्थापित १० वर्ष पुरानो हो यो । दोस्रो, हामी विद्यार्थीको भिसामा भन्दा ज्यादा क्यारियर काउन्सिलिङ्का ध्यान दिन्छौं, ताकि पढाई सकेपछि ऊ साँच्चिकै दक्ष र योग्य बन्न प्रेरित होस् । तेस्रो, हामीसँग अत्यधिक काउन्सुलरहरु अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गरिसकेका व्यक्तित्व छन् । विदेशको पढाई र वातावरणसम्बन्धी अनुभवी छन् ।
अन्तिम, महत्वपूर्ण विशेषता भनेको विदेशमा पनि हाम्रा विद्यार्थीको समस्या समाधानका निम्ति हाम्रो आफ्नै शाखा कार्यालय छ ।
प्रस्तुतीः धनन्जय बुढा
सचिवालयमा एक बोरा चिउरा र एक बोरा आलु राखेको छुः एकनाथ ढकाल, मन्त्री, शान्ति तथा पुनर्निर्माण